WARBIXIN: 10-ka shaqsi oo ku lugta leh kubadda cagta ee aadka u neceb Cristiano Ronaldo!! – Gool FM
(Yurub) 22 Luulyo 2019. Kabtanka xulka qaranka Portugal ahna dhaliyaha kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa iminka waxa ay Wargeysyadu ka shifeen qaar ka mid ah mucaaradkiisa, kuwaas oo iskugu jira ciyaartooy iyo macallimiin iyo madaxda ciyaaraha Caalamka.
Guuleystaha shanta jeer ee abaal-marinta xiddiga adduunka (Ballon d’Or) ee Cristiano Ronaldo ayaa ah nuuc xiddig oo sameyn ku leh kubadda cagta casrigaan, waxaana uu leeyahay taageerayaal aad u badan iyo mucaarad kale oo aan tiro yareyn.
CR7 ayaa waqti qurux badan ku soo qaatay kooxaha waa weyn ee Manchester United iyo Real Madrid waxaana loo arkaa xiddig ay qariib tahay in adduunka markale lagu arko asaaggiisa.
Haddaba warbixintaan waxaan idin kugu soo gudbinaynaa 10-ka shaqsi ee aadka u neceb Cristiano Ronaldo kuwaasoo ku lug leh kubadda cagta.
Waxaana warbixintaan inoo diyaariyay, soona jeedinaya Wariyeheenna Shaafici Maxamuud Nuur (Shaafinho).
Abdullahi Dhagaafe says:
frank Lampard ayaa kamid ah dadka neceb C.Ronaldo. wuxuuna ku tilmamay Nin islaweeyn